မီးရထားခရီးသွားခြင်းသည်ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းအတွက် Eco Friendly အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဤဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, အဆိုပါ ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်.
ဘာလင်၏အကောင်းဆုံးကလပ်ဘာလင်ရဲ့စက်မှုဇုန်inရိယာ၌နှင့်ရထားလမ်းအောက်၌ကွယ်ပျောက်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်. ဘယ်တော့မှမရပ်နိုင်သည့်ပါတီပွဲအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပါ, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးလူသည်ရပ်နေမှသာရပ်လိုက်နိုင်သည်. ဘာလင်မြို့ '' clubbing ညအဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ်စတင် 1 စနေနေ့တွေမှာတနင်္ဂနွေညအထိပါ. ဤအချက်သည်ဘာလင်အားကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွား and ည့်သည်များနှင့်ကလပ်သမားများနှင့်အတူဥရောပရှိအရသာအရှိဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးပါတီမြို့ကြီးများကိုသတ်မှတ်ပေးသည်.
နေ့နှင့်နေဝင်ချိန်အတွင်း, ဘူဒါပက်စ်သည်၎င်း၏အထင်ကြီးလောက်သောဗိသုကာကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်နေရာများနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်. သငျသညျလမ်းများပတ်လည်လှည့်လည်အဖြစ်, သင်၏မျက်လုံးများသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးအထင်ကရနေရာများနောက်မှလိုက်လျှောက်နေနိုင်သည်. ဒါပေမဲ့, ညအချိန်တွင်သင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာကမ္ဘာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်, ကုန်းတွင်းပိုင်းအဆောက်အအုံများ၏ကမ္ဘာသည်ဥရောပ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအရက်ဆိုင်များသို့လှည့်, နှင့်ဤထူးခြားသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Budapest တတ်၏5ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီမြို့ကြီးများ.
ပရာ့ဂ်သည်ဥရောပရှိအထူးချွန်ဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်. တစ်နေ့တာအတွင်းရဲတိုက်သို့ပြန်သွားရသည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်, မင်းသား, နှင့်ဇာတ်လမ်း Knights, ဒါပေမယ့်ညဥ့်အခါသင်အရူးညဥ့်ဘဝခရီးသွားလာ, တားစီးတံခါးနောက်ကွယ်မှကျန်ကြွင်းရှိရာ.
ဒတ်ခ်ျနိမ့် key ကိုစုရုံးကြိုက်တတ်တဲ့နေစဉ်, ကမ္ဘာအနှံ့ကခရီးသွား ask ည့်သည်တွေကိုမေးရင်, သူတို့ကအမ်စတာဒမ်မှာနောက်ဘက်ရှိတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, အမ်စတာဒမ်အတွက်, သငျသညျအရှိဆုံးကလပ်အသင်းများတွင်လက်ခံထားတဲ့အစွဲအသံရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်း တိုက်ရိုက်လွှဂီတ. Live show များသည်အမ်စတာဒမ်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်.
၎င်း၏မကြုံစဖူးအော်ပရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဘ ၀ အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသောမြို့သည်လည်းအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောညပျော်စရာညဖြစ်သည်. အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိအခြားနိုက်ကလပ်မြင်ကွင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်, ဗီယင်နာရှိ nightlife မြင်ကွင်းသည် ပို၍ ရင်းနှီးပြီး ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်. ဥပမာ, ဖြေလျော့ပေးခြင်းတံခါးမူဝါဒများနှင့်အတူဗီယင်နာအတွက်ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေနိမ့်သည်.
၀ င်ကြေးသည်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံကွဲပြားသည်. ဥရောပမြို့ကြီးအများစုသည်အလွန်တတ်နိုင်ကြသည်, ဥပမာ, ပရာ့ဂ်နှင့်ဘူဒါပက်စ်, 5-20 ယူရိုဝင်ပေါက်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများမှာအရက်, တချို့နေရာတွေကပိုစျေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးအရာ, စောစောလာ, ဒါကြောင့်သင်တန်းစီထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးပါတီ ၅ မြို့” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
AmsterdamParty berlinparty budapestparty europenightlife europepartycity တွေကတော့ ပါတီ PragueParty TravelVienna viennaparty